Kalandarka jeesjeeska | Hal-abuurka Online
Waxaan maskaxdeena ku haynaa waxyaabo badan oo badan: ballamaha caafimaadka, dhacdooyinka aan ka qayb galno, hawl maalmeedka, iwm. Taasina waxay keentaa in aan u baahanno in aan wadno ajande ama, tusaale ahaan, kalandarka kalandarka.
Laakiin, Waa maxay jadwalka taariikhda? Maxay inoo tari kartaa? Ma u haysaa hawlo mashruuc naqshadeeyaha garaafyada? Haddii aad la yaabban tahay waxaas oo dhan, waa kuwan jawaabaha.
2 Waa maxay sababta loo isticmaalo mid
3 Sida loo sameeyo kalandarka majaajilada
4 Tusaalooyinka kalandarka maaweelada
4.2 Curiyayaasha Envato
4.4 Jadwalka jadwalka miiska
4.5 Kalandarka gidaarka
4.6 Kalandarka gidaarka majaajilada
4.7 Kalandarka caadiga ah
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado waxa jeesjeesku yahay. Waxay ku saabsan tahay a Photomontage kaas oo naqshadeeyaha garaafyada uu si habboon isugu ururiyo naqshad. Tusaale ahaan, qiyaas inaad haysato nashqad funaanad uu u xilsaaray macmiil. Oo waxaad rabtaa inaad u muujiso naqshadaas sida ugu macquulsan. Laakiin dabcan, si aad taas u sameyso waa inaad tagtaa dukaanka halkaas oo ay ku sameeyaan funaanado caado ah, lacag bixi oo sug inay ku siiyaan. Maxaa dhacaya haddii aadan jeclayn naqshadeynta? Ma laga yaabaa inaad ku laabato shaqada oo aad maalgashato si aad mar kale uga baxdo?
Si taas looga fogaado, majaajilada ayaa loo isticmaalaa tan iyo markii aad isticmaali karto sawirka dhabta ah ee dhabta ah ee sida naqshaduhu u eegi lahaa shaati dhab ah.
Waxaan u malayn karnaa isku mid marka loo eego jaldiga buugga, buug-yaraha, sabuuradaha, iwm. Iyo, dabcan, xitaa jadwalka taariikhda.
Waa maxay sababta loo isticmaalo mid
Kalandarka maaweelka wuxuu leeyahay adeegsiyo badan iyadoo ku xiran naqshadiisa. Tusaale ahaan, qiyaas jadwal weyn, oo ah nooca gidaarka ku dheggan. Waxay noqon kartaa in macmiilku kuu wakiishay inaad naqshadayso jadwalka taariikhda ay siinayaan shaqaalahooda iyo macaamiishooda waxayna u baahan yihiin inaad u diyaariso iyaga.
Ikhtiyaar kale, jadwal si uu awood ugu yeesho inuu qoro dhammaan ballamaha iyo dhacdooyinka muhiimka ah si wax walba ay si fiican uga muuqdaan iyo in ay sidoo kale waafaqsan yihiin astaanta shakhsi ahaaneed ama shirkadda (si qof kastaa u isticmaalo nidaam isku mid ah).
Sida aad arki karto, waa suurtagal waxayna kuu ogolaaneysaa inaad haysato a dheelitirka iyo xakamaynta hawlaha la qabanayo. Maxay tani ka dhigan tahay? abaabul weyn, walbahaarka oo yaraada iyo qanacsanaanta badan sababtoo ah qofku wuxuu arkayaa sida uu u awoodo inuu u fuliyo hawl kasta oo aan waxba iloobin.
Sida loo sameeyo kalandarka majaajilada
Samaynta kalandarka kalandarka ma aha wax adag. Sida aad ogtahay, kalandarka wuxuu ka kooban yahay 12 bilood, taas oo ah sida caadiga ah. Hadda, nashqada uu macmiilkaagu ku weydiin karo wuu kala duwan yahay. Tusaale ahaan:
Jadwal ay 12 bilood ka muuqdaan xaashi isku mid ah. Caadi ahaan, kiiskan, jeesjees ayaa loo samayn doonaa qaabka A3 si loo koobo bilaha oo dhan. Kuwani waxay noqon karaan kuwo aad u yaryar, laakiin ku filan in la arko maalmo iyo bilo iyada oo aan wax dhib ah la kulmin. Waxa kale oo laga dhigi karaa mid weyn (sida laba A3 oo la isku daray) si loo kordhiyo cabbirka ugu dambeeya.
Jadwal ka kooban 3 bilood. Tusaale ahaan, Janaayo, Febraayo, iyo Maarso hal xaashi; April, May iyo June mid kale, iwm.
Jadwalka sawirada leh Midda ugu badan ayaa ah in bil kasta ay qaadato sawir, in kasta oo kuwan ay yihiin kuwa aad looga faa'iidaysan karo oo kaliya loo isticmaalo jadwalka isbahaysiga maadaama intooda badani ay doortaan hal sawir iyo bilaha hoostooda la gooyo si ay u gooyaan boggaga bilaha ayaa socda. by.
Ma inaan waxaas oo dhan ku xisaabtano naqshadeynta? Dabcan, isku mid maaha in la sameeyo kalandarka hal bog ka badan laba iyo toban oo lagu daray daboolka.
Bilaha aad dhib badan kala kulanto naqshadeynta, maadaama ay jiraan qaab-dhismeedka, iyo wax la mid ah ayaa ku dhaca jaasooyinka jadwalka. Haddii aadan rabin inaad sameyso, ama aad rabto Isticmaal template si aad ugu beddelo sida aad jeceshahay oo aad ku shaqeyso naqshaddaada saldhig, waad ka faa'iidaysan kartaa oo aad isticmaali kartaa.
Laakiin haddii aad rabto in aad adigu samayso, waa in aad xisaabta ku dartaa:
Sawirka ama sawirada waa inaad isticmaashaa.
Qoraalka nambarada, laakiin sidoo kale qoraalka (maxaa yeelay shirkadaha qaarkood waxay rabaan inay ku daraan magacyadooda, bogga internetka, iwm.).
Kalandarka (taasi waa sahlan tahay).
Waxa jiri doona wax yar oo hal-abuur ah oo ka hadhi doona barnaamijyada naqshadaynta sawirka si xaashi xaashi loogu tago ama mid weyn oo bilaha oo dhan wada socda.
Tusaalooyinka kalandarka maaweelada
Sida aan ognahay sida ugu wanaagsan ee lagu arki karo waxa kalandarka majaajilada ah ay tahay in lagu tuso tusaalooyin, halkan waxaa ah bogag aad ka heli doonto jeesjees iyo sidoo kale naqshado laga yaabo inay xiiso yeeshaan, labadaba heer shaqsi / xirfadeed, iyo sidoo kale macaamiisha.
Xaaladdan oo kale ayaannu haynaa In ka badan 3000 oo kheyraad majaajillo ah, Qaar ayaa naga caawin doona inaan tusno macmiilka sida jadwalku u ekaan doono iyo kuwa kale oo kaa caawin kara inaad aragto sida loo ururiyo mid sidan oo kale ah.
Xaaladdan oo kale waa inaad maskaxda ku haysaa in Inta badan alaabta aad ku arki doonto halkan waa la bixiyaa. Si kastaba ha ahaatee, qaar aad qaali uma aha oo waad tixgelin kartaa, gaar ahaan haddii aad leedahay macaamiil kuwaas oo inta badan ku weydiiya mashaariicdan maadaama ay tahay hab lagu soo bandhigo si dhab ah.
Bog kale oo lagu helo maaweelada kalandarka waa kan. Dhab ahaantii, waxaad leedahay noocyo badan, inkastoo runtii Ma aha mid aad u badan oo la mid ah natiijada ka shaqeynta jadwalka.
Habka fikradaha, waxay kuu adeegi kartaa.
Jadwalka jadwalka miiska
Haddii macmiilkaaga, ama laftaadu, ay rabaan jadwalka miiska, nooca ay yihiin kuwa yaryar oo bilohu way socdaan markaad caleemaha hore uga sii gudubto xagga dambeHalkan waxaa ah jeesjees muujin doona daboolka iyo qaar ka mid ah sawirada gudaha.
Xaaladdan oo kale, jadwalkan ayaa soo baxay sababtoo ah, hal xaashi, waxaad haysataa saddex bilood. Dhab ahaantii, sida ay tahay, waxaa laga yaabaa inaan u maleyneyno in macaamilka uu doonayo inuu shaabadeeyo bilaha seddexda mar si isticmaaluhu uu uga saaro wax yar.
Sooyaalku wuxuu noqonayaa sawir sidoo kale koobaya bilaha.
Kalandarka gidaarka majaajilada
Mid kale oo ka mid ah jadwalka darbiga waa kan. Xaaladdan oo kale waxay noqon lahayd laba bilood oo xaashi kasta ah oo aad ugu tiirsan qaabaynta qoraalka iyo tirooyinka halkii ay ku dari lahaayeen sawirada.
Waxaad haysaa diyaar Halkan.
Kalandarka caadiga ah
Ma rabtaa jadwal caadi ah? Kuwaas oo ah bishiiba hal xaashi miyaa ku jiray iyo mid walba sawir? Hagaag, halkan waa majaajilo kaa caawin karta inaad u muujiso macmiilkaaga.
Sida aad arki karto, waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo kalandarka majaajilada, ha ahaato bil kasta ama bil kasta si aad uga shaqeyso. Midkee ayaad dooran lahayd inaad u soo bandhigto naqshadahaaga macmiilkaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Kalandarka jeesjeeska